သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်ဖုန်းကိုထိန်းညှိခြင်း - သင်၏ ဦး နှောက်ကိုညစ်ညူးစေသည်
ညစ်ညမ်းသောသွေးဆောင်မှုကိုဖယ်ရှားရန်သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်ဖုန်းကိုထိန်းထားခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကလစ်တစ်ချက်ဖြင့်ရသောအခါ၎င်းသည်တည်ရှိနေသောအတွင်းပိုင်းပconflictိပက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီအတွင်းပိုင်းပconflictိပက္ခကနေစိတ်ဖိစီးမှုကိုပြန်လည်သက်ရောက်စေပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမရရှိနိုင်ပါက ဦး နှောက်သည်အနားယူရန်နှင့်စိတ်သက်သာမှုရရန်အခြားနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေရန်ပုံရသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်အောင်မြင်စွာ reboot လုပ်သောသူများသည်သူတို့၏ကွန်ပျူတာများကိုယဉ်စေမည့်နည်းလမ်းကိုရှာဖွေကြသည်။
(အခြားထုတ်ကုန်များပေါ်မှာပိုပြီးအကြံပေးချက်များသည်ဤစာမျက်နှာကိုအောက်တွင် childpages ကြည့်ရှုပါ။ )
ခဏတစ်အကွာအဝေးမှာထားပါ။ တဦးတည်းကောင်လေး said:
ကျွန်တော်အခု ၁၀ ရက်ရောက်နေပြီ၊ နေ့ ၁၁ ရက်မသေချာဘူး။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည် P / O မပါသည့်ခရီးအရှည်ဆုံးဖြစ်သဖြင့်နောက်ဆုံးရလဒ်အချို့ကိုတွေ့ရခြင်းမှာ ၀ မ်းသာပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည်ကျွန်ုပ်၏မိဘများနေရာတွင်မိနစ် ၅၀ မဝေးပါကအနည်းဆုံး ၃ ကြိမ်ပြန်လုပ်မိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ဒါဟာအပြောင်းအလဲအားလုံးလုပ်ခဲ့လို့ဒါကိုလုပ်နိုင်ဖို့၊ လက်တွေ့ကျကျလုပ်နိုင်သူတိုင်းကိုငါတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ မျှဝေထားသောကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပင်သင်မတူညီသောအသုံးပြုသူအကောင့်တစ်ခု ဖန်တီး၍ ညစ်ညမ်းသော filter ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုတစ်ဦးလတ်ဆတ်စတင်ဘို့ရှင်းလင်းပါ။ ယောက်ျားတစ်ယောက် said:
ပထမ PMO မရှိသည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပါဝါများပြားလာခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပျက်သွားသည်။ ငါတကယ်ငါ့ကွန်ပျူတာကို "reboot" ခဲ့ကြရသည် MPO မရှိတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာနေဖို့ကျွန်ုပ်ကိုတကယ်ကူညီပေးတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာမှာအဲဒီမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသစ်မရှိဘူးဆိုတာကိုသိခြင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှု့ရန်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကို“ CLEAN” (သို့) ညစ်ညမ်းမှုကင်းမဲ့နေစေရန်စဉ်းစားစေသည်။
ငါကြွက်သားမှတ်ဥာဏ်ကနေ browser ကိုရေးသားဖို့လေ့ကြောင်းတစ်ဦးတည်းသာစွဲ site ကိုရှိသည်, ဒါကြောင့်ငါမယ့်အစားနေ့စဉ်သတိပေးခကျြအတှကျ nofap ပြန် redirect ဖို့ browser ကိုထားကြ၏။ URL ကို Redirector Browser ကို Plugin ကို
Browser ကို Plugins တွေကို
URL ကို Firefox အတွက် Redirector Excellent က!
URL ကို Chrome အတွက် Redirector untested
သင်ဟာ Redditor တစ်ယောက်ဆိုရင်
http://redditenhancementsuite.com/ installed ပြီးတာနဲ့အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာ gear icon ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ထိုအခါက Settings Console ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ Subreddit filter ကိုလက်အောက်တွင်ရုံသငျသညျ filter ချင်သော subreddit (s) ၏ခေါင်းစဉ်ကိုရိုက်ထည့်။
သင့်ရဲ့ access ကိုပိတျဆို့:
သင်၏စကားဝှက်ကိုတစ်ယောက်ယောက်အားသိမ်းထားပါ၊ ထိုစကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်အီးမေးလ်ဖြစ်ပါစေ။ အကယ်၍ သင်သည်တကယ်ကိုခက်ခဲလွန်းပါက k9 တွင်သင်၏လှုပ်ရှားမှု၏ admin အစီရင်ခံစာများကိုပေးပို့ရန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် proxy server များမရှိပါ။ နောက်တဖန်၊ သင်၌ယုံကြည်စိတ်ချရသောသူနှင့်သင်မလွယ်ကူသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ရှိပါကအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဒါကလုံးဝလိုအပ်တယ်၊ လူအများစုကဒါကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးညည်းညူနေကြတာတောင်ငါကြားရပေမဲ့မင်းဒီမှာလုပ်ရတာဘာလဲ။ သင်၏ blocker သည်လုံခြုံသောအသွားအလာကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိစေရန်သေချာစွာသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ငါသည်လည်း installed StayFocusd, သင့်ကိုယ်သင်ချော်ခံစားရလျှင်ကိုယ်တိုင်သင့် browser ပိတ်ပစ်ရန်ကောင်းတဲ့နည်းနည်းနျူကလီးယား option ကိုရှိပါတယ်ရာ။
Local Disk (c :) 'ကိုဖွင့်ပါ။
ပြီးတော့ system32 ကိုဖွင့်ပါ။
ထို့နောက် 'hosts' ဖိုင်ကို notepad သို့မဟုတ် wordpad စသည့်စာသားတည်းဖြတ်ရေးပရိုဂရမ်နှင့်ဖွင့်ပါ။
> 127.0.0.1 - လိုင်းထည့်ပါ www.blockthissite.com
အဆိုပါ www မပါဘဲသင်အပြောင်းအလဲများပါဝင်သည်သေချာအောင်
ဤကဲ့သို့သော -> 127.0.0.1 blockthissite.com
'File' ကိုနှိပ်ပါ 'Save' ကိုရွေးပါ။
ဒါကမှအားလုံးရှိပါတယ်! သင်၏ဘရောက်ဇာကိုပိတ်ပြီး၎င်းအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ပြန်လည်ဖွင့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် Windows XP အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခြား windows ဗားရှင်းများအတွက်ဖြစ်စဉ်သည်တော်တော်လေးဆင်တူသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တွင်အခြားဗားရှင်းများမရှိကြောင်းစိတ်မကောင်းပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျနော် YouTube ကိုငါ့အဘို့အစစ်အမှန်လူသတ်သမားဖြစ်သည့်ပိတ်ဆို့ရှိသည်။
တစ်ဦးက Web Filter ကို Get သင်၏ကွန်ပျူတာ (သို့) ဖုန်းကိုထိန်းညှိရန်အတွက် (အချို့သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်) ။ အဲဒီ link မှာညွှန်ကြားချက်များနှင့် အရေးကြီးသောအကြံပေးချက်များ porn နှင့်ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေကိုထုတ် filter မှအခမဲ့နည်းလမ်းတွေပါ။ အောင်မြင်စွာပြန်လည်သက်သာတဲ့သူလူတိုင်းနီးပါးတစ်ဦးအနေဖြင့် (နောက်ဆုံးတွင်) အတွက်ဒီ tool ကိုအသုံးပြုသည်, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်အချို့အချိန်ကုန်သက်သာခြင်းနှင့်ချက်ချင်းအသုံးပြုပါ။
ဝဘ်စစ်စစ်ကိုသုံးပါ။ သင်၏စွဲချက်ကိုဆင်ခြေမပေးပါနှင့်၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအတွက်လိုအပ်သောနည်းလမ်းတိုင်းကိုအစီအစဉ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးစမ်းကြည့်ဖို့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူး။ ဒါကိုလုပ်ပြီး porn မပါဘဲရက် ၃၀ သွားဖို့ဘယ်လောက်လွယ်ကူတယ်ဆိုတာကြည့်ပါ။ M နှင့် O သည် ပို၍ ခက်ခဲလိမ့်မည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်ဟုမထင်နိုင်ပါ။
ALERT: ယောက်ျားတွေတစ်လူနည်းစုများအတွက်အမှန်တကယ် filter တစ်ခု impedance ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ သူတို့ကကိုယ့် code ကို crack ခြင်းနှင့် filter ကိုဖြတ်ပြီးခုန်ဖို့ကြိုးစားခြင်း၏ dopamine buzz ကိုဆီးတားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့အတွက် filter-break သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲခြင်းနှင့်တူညီသည်။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုကြောင့်သင်စစ်ထုတ်။ မရနိုင်ပါကဤနည်းလမ်းကဲ့သို့သောဖန်တီးမှုတစ်ခုခုကိုစမ်းကြည့်ပါ စောင့်ကြည့်ဖို့သင့်ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုထုတ်ရှင်းလင်း.
တဦးတည်း employ ဖို့အထိရောက်ဆုံး tools တွေအနေနဲ့တာဝန်ခံမိတ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။ X3watch အခမဲ့တာဝန်ခံ software ကိုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် မလုံလောက်ခဲ့ကြသူအနည်းငယ်သတ္တိယောက်ျားတို့ကအကြံပြုသည်။ တစ်ဦးကယောက်ျားတစ်ယောက်ကကရှင်းပြခဲ့သည်:
သငျသညျအငျတာနကျကို browse နှင့်မေးခွန်းထုတ်စရာပစ္စည်းဆံ့ရသော site တစ်ခု, access တိုင်း program ကို, အချိန်ဆိုက်အမည်ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း, ဆိုက်သွားရောက်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်ချိန်းတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ဦးကလူတစ်ဦး (တစ်ဦးခံမှုမိတ်ဖက်) သင်လအတွင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပေမည်အားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှမေးခွန်းထုတ်စရာက်ဘ်ဆိုက်များင်တစ်ဦးကအီးမေးလ်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
သင်မမျှဝေလိုပါကဤနေရာတွင်အခမဲ့စက်ရုပ်တာ ၀ န်ခံမှုမိတ်ဖက်ဖြစ်သည် HabitForge လို့ခေါ်တယ်။ ဒီမှာအသုံးပြုသူတစ် ဦး ပြောတာက
Willpower နှင့်ဇွဲရှိခြင်းသည်အဝေးကြီးသို့သွားလိမ့်မည်။ သို့သော်နည်းနည်းလေးသောနည်းပညာကလည်းကူညီနိုင်သည်။ မင်းရဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့မင်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့လှုံ့ဆော်မှုပေးတဲ့အခမဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုကိုငါတွေ့တယ်။ ၎င်းသည်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်နှင့် PMO အခမဲ့ဖြစ်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ သင်လုပ်တဲ့အရာက ၂၁၊ ၃၀ ရက်အထိရည်မှန်းချက်ကိုတည်ဆောက်တာဖြစ်တယ်။ သင်၏ပန်းတိုင်နှင့်အမီလိုက်နေသလားဟုမေးရန်အီးမေးလ်ဖြင့်အကြောင်းကြားစာတစ်ခုနေ့စဉ်ရရှိသည်။ ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေဆက်တက်နိုင်အောင်ကူညီပေးတာအံ့သြစရာပဲ။ သင်၏နေ့စဉ်စိတ်အခြေအနေ / တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံရန် Android app တစ်ခုဒီမှာပါ။
ယာယီသငျ့အငျတာနကျအသုံးပွုခှငျ့ပိတျဆို့ နှင့် "မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း" (http://selfcontrolapp.com/) or www.getcoldturkey.com အမျိုးမျိုးသော site ကိုအဖွဲ့ဝင် said:
ငါ porn ကိုကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းရှိပါကအဆိုပါတတ်ပြီးပြေသည်တိုင်အောင်, ငါသည် 15 မိနစ်ကြောင့်လုပ်ကွက်များအင်တာနက် SelfControl ထားကြ၏။ ငါဆုတ်ခွာ-အိပ်မပျော်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ် assuage ဖို့တိုက်တွန်းရရှိလျှင်ငါ့ကိုအွန်လိုင်းသွားရန်အဘို့အလမ်းမရှိသောဒီတော့အင်တာနက်ကိုတစ်ခုလုံးကိုညဥ့်ပိတ်ဆို့ခံရကြောင်းသို့မှသာသို့မဟုတ်ငါထားကြ၏။
ဆဲလ်ဖုန်းအဘို့အမျှငါသည်ငါ့ဖုန်းပေါ်မှာ browser ကိုသော့ခတ်မယ့်အခမဲ့ app ကိုသော့ခတ်ကိုအသုံးပြုပါ။ ငါသည်လည်းငါသတိရဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်တဲ့စကားဝှက်ကိုမှထားကြ၏။
Ubuntu ကိုအသုံးပြုပြီး“ Self-Control” ကိုစမ်းသုံးချင်သောသူမည်သူမဆိုဤနေရာတွင် package ရှိသည်။ svn.jklmnop.net/projects/SelfControl/selfcontrol_0.9-1_all.deb
Cold Turkey သည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအခမဲ့ဗားရှင်းကို သုံး၍ ခုနစ်ရက်အထိပိတ်ပင်ထားသည်။ opendns သည်ပိတ်ဆို့ရန်ပြင်ဆင်ခြင်းများကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်ပြောင်းရန်အလွန်လွယ်ကူကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် opendns ကိုသတ်မှတ်ထားပြီး porn နှင့် nudity sites များအားပိတ်ထားပြီး opendns သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ဆို့ရန် cold turkey ကိုသတ်မှတ်လိုက်သည်။ အအေးကြက်ဆင်ကိုငါးဒေါ်လာဖြင့်လည်းသင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အချို့သောပရိုဂရမ်များကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်တစ်လအထိပိတ်ဆို့ခြင်းတို့ကဲ့သို့သောအပိုအင်္ဂါရပ်များပေးသည်။ ငါရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည်တန်သည်ဟုထင်သည်။ ထို့ကြောင့်ငါလုပ်ခဲ့ပြီးသောကြောင့် [ငါ၏ပုံမှန် chat site ကို] run ခြင်းမှပိတ်ဆို့ပြီး opendns ကိုပိုမိုကြာကြာပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် www.getcoldturkey.com/
ငါ့ဖုန်းပေါ်ရှိညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ရန်လည်းကျွန်ုပ်၏ဖုန်းတွင် cloudacl ကိုအသုံးပြုသည်။ opendns.com သို့ဝင်ရောက်ပါ။ ၎င်းမပါဘဲကျွန်ုပ်၏ဖုန်းပေါ်ရှိ opendns ကိုအလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်ပြီး၎င်းကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျည်ဆံဒဏ်ခံနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းအားဖြတ်သန်းရန်အတွက်အလွှာများစွာရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းအားငါ mouse ခလုတ်နှစ်ချက်နှိပ်ရုံနှင့်ချက်ချင်းလက်ငင်းရခြင်းထက်ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်နေသည်များကိုရပ်တန့်ရန်၊ porn မှဝင်ရောက်ခွင့်။
ငါ့ဖုန်းနှင့်ပတ်သက်သောတနင်္ဂနွေတွင်စနစ်တစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာအတွက် SelfControl ကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းအင်တာနက်မှမိမိကိုယ်ကိုသော့ခတ်ပြီး yahoo အီးမေးလ်လိပ်စာသို့စကားဝှက်ကိုအီးမေးလ်ပို့သည်။ ယခုငါစကားဝှက်မရနိုင်ပါ၊ အကြောင်းမှာ yahoo သည် SelfControl တွင်အဖြူရောင်စာရင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်မသောက်မီကျွန်ုပ်ဖွင့်သည်။ စကားဝှက်ဟာအခြေခံအားဖြင့်ကျပန်းဂဏန်း ၄ လုံးဖြစ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝမမှတ်မိနိုင်ပါ။ အနည်းငယ်လှည့်စားပြီးအဝိုင်းသွားပေမယ့်အဆင်ပြေနေပုံရသည်။
သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဖုန်းကိုထိန်းညှိပေးခြင်း - ၎င်းကိုပိတ်ဆို့ပါ။ ပိတ်ပါ
တစ်ခုမှာကောင်လေး (သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရန်စကားဝှက်ကိုပေးကမ်းခြင်း) ဒီ blocker အကြံပြု: http://www.tueagles.com/anti-porn/
relapse ကာကွယ်တားဆီးဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း: ကပိတ်ဆို့! အသုံးပြုမှု K9 (+ k9safesearch) နှင့် ybop အပေါ်ဖော်ပြထားတူသော OpenDNS (ဈစကားဝှက်ကိုနှိမ့်ချရေးသားခဲ့သည်ပေမယ့်နောက်ကျောဒါလမ်းမရှိသောကြောင့်မီးရှို့ပစ်)
Adobe Flash ကို uninstall !! (host.adobe.com ရှိ Adobe ဆော့ဖ်ဝဲများကိုပိတ်ဆို့ပါ။ ၎င်းသည် p-streaming ဆိုဒ်များအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းသေစေနိုင်သည်။ စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုကျော်လွှားရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ဒီကွန်ပျူတာမှာဗွီဒီယိုတွေ၊
သင်၏ browser (leechblock mozilla တွင်) သို့မဟုတ်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကို (PMO ၌သုံးသောအချိန်) အချို့အချိန်များတွင်ပိတ်ပါ။ ညနေ (၂) နာရီမှညသန်းခေါင်အထိဝက်ဘ်ဆိုက်များကို (ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့် ybop မှလွဲ၍) ပိတ်ပင်ထားသောကြောင့်နံနက်ယံ၌အခြား browsing လုပ်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့သည် (နံနက်အချိန်များတွင် PMOed ဘယ်တော့မှမ) ။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်မှုအရာတို့ကိုရှာတွေ့မှာ google သို့တင်ရန်အတွက်သော့ချက်စာလုံးများကိုပိတ်ဆို့။
သင်၏ကွန်ပျူတာ (သို့) ဖုန်းကိုယဉ်ရန်ပိုမိုရေပန်းစားသောအကြံပြုချက်များ။
ပုံများနှင့်နဖူးစည်းစာတန်းကြော်ငြာဟာ Off Turn - ကိုယ့်ကိုအက္ခရာများမှကာကွယ်ရန်သင်၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပါ။
သင့်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကာကွယ်ပါ - ပြန်လည်ရယူထားသောအသုံးပြုသူထံမှညွှန်ကြားချက်များ။
သင့်ရဲ့ Computer ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုပါနဲ့အခြားအကြံပေးချက်များ - အမျိုးသားများသည်သူတို့၏အကြံဥာဏ်များကိုမျှဝေကြသည်။
ဆဲလ်ဖုန်း, Android, iPhone, iPad